Dowladda Turkiga Oo Xidhay Admiraallo Dhaleeceeyay Kanaal Wayn Oo Uu Amray Erdogan | Gaaroodi News
Dowladda Turkiga Oo Xidhay Admiraallo Dhaleeceeyay Kanaal Wayn Oo Uu Amray Erdogan
Marinka Bosphorus ayaa ka mid ah marinnada ugu mashquulka badan dunida
Turkiga ayaa xiray 10 admiraal oo howlgab ah ka dib markii ay si cad u dhalleeceeyeen mashruuc kanaal wayn loogu dhisayo magaalada Istanbul, arrintaas oo uu garwadeen ka yahay Madaxweyne, Recep Tayyip Erdogan.
Dadkaas la qabtay waxay ka mid yihiin 104 saraakiil sare oo howlgab ah oo saxiixay warqad furan oo ay uga digayaan kabixitaanka heshiis caalami ah oo loo adeegsado maamulka marinka Bosphorus ee istaraatiijiga ah.
Marinka oo ay aad u isticmaalaan maraakiibta, waa goobta kaliya ee biyo ah ee Badda Madow ku xirta badda Mediterranean-ka.
Kanaalka la qorshaynayo in la dhiso ayaa noqon doona marin kale.
10-ka qof ee horey uga tirsanaa ciidamada Turkiga, waxaa lagu eedeeyay “in ay ogolaadeen in ay dambi ka galaan ammaanka qaranka iyo habka kala sarraynta dastuurka”.
Arrintaas waxay ka dhigeysaa in ay ku dembi yihiin xubno badan oo militariga ka tirsanaa oo loo maxkamadaynayo iskudaygii afgambigii ee dhicisoobay ee 2016 ka dhacay Turkiga, kaas oo ka dhan ahaa Madaxweyne Erdogan.
“Ku sugnaada halka aad joogtaan… Dalkan waxa uu muujiyay sida uu uga adkaaday qofkasta oo ku jiray kooxdii wadday inqilaabkii 15-kii July . Waad taqaan halka aad mudan tahay!” waxaa sidaa sheegay afhayeenka madaxtooyada, Fahrettin Altun, isagoo caraysan, mar uu ka jawaabayay warqadda ay qoreen admiraallada howlgabka ah.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee Turkiga waxa ay dowladda ku eedeeyeen in ay ka buuxdo oo saameyn ay ku yeelatay “cabsi afgembi”.
Bishii la soo dhaafay dowladda waxay meelmarisay qorshayaasha Kanaalka Istanbul, kaas oo dhirirkiisu gaari doono ku dhawaad 45km (31 mile), wuxuuna mari doona waqooyiga illaa koonfurta Istanbul, oo galbeedka ayuu ka xigi doonaa marinka Bosphorus. Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan
Admirallada howlgabka noqday waxa ay cabsi ka muujiyeen in arrintaasi ay waxyeelayso Heshiiskii Montreux ee 1936, kaas oo Turkiga gacanta u galiyay inuu maamulo marinka Bosphorus, uuna xaddido maraakiibta gacansiga iyo kuwa ciidammada.
Waxay qoreen in “wahadalkasta iyo dhaqdhaqaaqkasta” oo heshiiskaas wadaxaajood u furi kara, in la iska ilaaliyaa, iyagoo intaas ku daray in taasi “ay si fiican u ilaalinayso danaha Turkiga”.
10-ka admiral ee la xiray waxaa ka mid ah Cem Gurdeniz, oo badanaa lagu tilmaamo inuu yahay aabaha siyaasadda badda ee cusub ee uu muranka badan ka dhashay ee loo yaqaan “Blue Homeland”.
Waa arrin siyaasadeed oo lagu sheegay in Turkiga uu leeyahay xuquuqda badeed ee Bariga Mediterranean-ka, oo ay ku xirto biyaha jasiiradaha Giriigga. Xiisadaha ayaa sare u kacay sannadkii la soo dhaafay, xilli Turkiga uu soo saaray gaas iyo naafto ku jirta aaggaasi.
Jamhuuriyaddii cilmaaniga aheyd ee uu aasaasay Mustafa Kemal Ataturk, waxaa militarigii xilligaa loo arki jiray ilaaliyaha amarka cilmaaniyada.
Hasayeeshee Mr Erdogan, oo hoggaamiya Xisbiga Islaamka uu ku qotodheer yahay ee AK, ayaa yareeyay awoodda militariga, waxa uuna booriyay dhaqamada muxaafidka ah.
2011-kii, Erdogan ayaa sheegay in “gacmaha ay u bannaysanayaan Kanaalka Istanbul, kaas oo noqon doona mid ka mid ah mashaariicda ugu waa wayn qarniga, kaas oo qiima badnaan doona kanaallada Panama iyo Suez”.
Wuxuu sheegay in marinkaas uu dhulka hoos loogu qodi doono 25m (82ft) ayna maalintiiba mari doonaan 160 doonyood